Turkiga oo hakad geliyay Mashaariicda uu ka wado Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Turkiga oo hakad geliyay Mashaariicda uu ka wado Muqdisho
Muqdisho (KON) - Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya, ayaa shaacisay in si KMG ah ay hakad u gelisay Dhamaan Howlaha kala duwan & Mashaariicda Horumarineed ee ay kawaday Magaalada Muqdisho.
Cemalettin Kani Torun, Safiirka Xilka kasii degaya ayaa Kulan uu la qaatay Sabatidii dhamaan Mas'uuliyiinta Hay'adaha dalkiisa ka socda ayaa ugu baaqay in ay joojiyaan Shaqada inta ka dhiman Bisha Ramadaan, kadib markii laga warhelay Weeraro Al shabaab la damacsan yihiin.
Sidoo kale, waxaa la fasaxay Shaqaalaha dhanka Dhismaha Wadooyinka Muqdisho, kuwaasi oo aaday hadda dalkooda Turkiga, maadaama ay Safaaradda soo saartay Digiin dhanka Amnigooda ah inta lagu gudaha jiro Ramadaan.
Mid kamid ah Howlwadeenada u dhashay dalka Turkiga ee qaabilsan dhismaha Wadooyinka ayaa u sheegay Keydmedia Online, in uu dib ugu laabanayo dalkiisa oo uu iska sii joogayo inta ay ka dhamaanayso Bisha Ramadaan, isagoo intaasi ku daray kuwa isaga lamidka ah ay sidan oo kala sameeyeen.
"Hadda ma jiraan Mashaariic ka socoto Muqdisho, oo Hay'adaha Turkiga & Shaqaalahooda wadaan, sababtoo ah si KMG ah ayaan hakad u gelinay Mudad ka dhiman Bishan, Qof walb oo u dhashay Turkiga waxaa la siiyay Fasax gaaban oo dalkiisa ku aadayo, si uu ula soo ciido Dadkiisa & Caruurtiisa," ayuu yiri Serfed, oo Shaqaalaha dhismaha Wadooyinka Madax u ah.
Bisha July, 2013 Kooxda Kooxda Al shabaab ayaa Weerar Qarax ah ku qaaday Guri ay ka degan yihiin Shaqaalaha safaaradda Turkiga Degmada Hodon ee Gobolka Banaadir, iyadoo Weerarkaasi uu kasoo gaaray Shaqaalaha khasaaro siagu jira Dhimasho & Dhaawac.
Wixii markaasi ka danbeeyay Shaqaalaha kala Turkiga ee Howlaha kala duwan ka wada Muqdisho ayaa u noday Kooxda Al shabaab bartilmaameed, iyadoo ay jiraan Dhowr Shaqsi oo Turkiga oo dhowaan Siyaabao kala duwan loogu dilay Magaalada.